Kenya oo Shidaal ka Baaranaysa 3900 Sq Km ee Gudaha Dhulbadeedka aaga Raas Kanbooni ee Jamhuriyadda Soomaaliya
Warbixin/Faallo: SomaliTalk.com | October 14, 2011
Aagga Block L5 oo Kenya gudaha u soo gashay
Xukuumadda FKMG ma ka hor istaagi doontaa Kenya sahaminta ay ka waddo gudaha Badda Soomaaliya?
Damacii Kenya ee Badda Soomaaliya oo 40-jirsadey
Sheekadii Badda miyey Dhamaatay maadaama Baarlamaanku diiday labba goor? Arintii Difaaca Badda halkaas miyaan uga haraa?
Shidaal Qodida Kenya iyo Norway ee Dhulbaddeedda Soomaaliyeed
Go’aankii Baarlamaanku Goormuu Sharci noqonayaa?
Dalka Kenya ee Soomaaliya dariska la ah ayaa waday damaaci soo jireen ah oo ku aadan Badda Soomaaliya, damaacigaas oo hadda xilligan aan joogno 40-jirsaday. Qoraalkan waxaan kusoo bandhigi doonaa Kenya oo Cabiratay qayb kamid ah badda Soomaaliya, ugana howl gashay sidii dhul ayadu leedahay. Si kale hadaan u dhigno Kenya waxay kusoo xadgudubtay Qaranimmada Wadanka Soomaaliya, kadib markii ay shidaal baarid kasamaysay dhulbaddeed Soomaaliyeed ee aagga Raaskanbooni. Damaaciga Kenya ayaan wada arki doonaa, anagoo soo bandhigi doona qoraallo taariikhi ah iyo doodo hadda ka hor dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya. Ugu horayn aan wada akhrino Kenya oo bishii lasoo dhaafay ee September 2011, Dhul-badeedka Soomaaliya Shidaal baaris kabilowday.
Waxaa 21-kii September 2011 warbaahinta loo sheegay in shirkadda TOTAL (ee laga leeyahay dalka Faransiiska) ay iibsaneyso saamiga boqolkiiba 40% shidaal ka qodista 5 aag (Blocks) oo kala ah Block L5, L7, L11a, L11b iyo L12. Heshiiskaas waxaa shirkadda Total la gashay shirkado hore saamiyo aaggaas ugu lahaa iyo dawladda Kenya, waxaana heshiiskaas la kala saxiixday 19-kii September 2011, maalin kaddibna 20-kii September 2011 ayaa loo gudbiyey Wasaaradda Tamarka ee Kenya si heshiiskaas loo ansixiyo, taas oo in la ansixiyey saxaafadda loo sheegay 6-dii October 2011.
Shirkad kamid ah shirkadaha saamiga ku leh aaggaas waxay sheegtay in sannadkan 2011 ay sahaminta shidaalka aaggaas u qoondaysay US$6 million oo wajiga hore ah. Waxaana warbaahinta loo sheegay in aaggaas laga sameeyey sahaminta nooca loo yaqaan 2D Seismic iyo in dhawaan ay soo gabagaboobeyso in qaar kamid ah aaggaas lagu sameeyo 3D Seismic – taas oo ah farsamo sahamin oo lagu ogaado in badda hoosteeda uu ku jiro shidaal. Waxaana markaas qorshaysan in ceelka koowaad aaggaas laga qodo 2012.
Haddaba, BLOCK-yadaas (ama xirmooyinkaas) waxaa kamid ah BLOCK L5, kaas oo gudaha u soo galay Dhul-Badeedka Jamhuriyadda Soomaaliya.
Marka la eego khariidadaha ay faafiyeen shirkadaha heshiiska la galay Kenya, waxay muuninayaan in aagga Block L5 uu qiyaastii 150 km oo toos ah gudaha ugu jiro xuduudka Soomaaliya ee dhanka Koonfur kaga aaddan Kismaayo, aagga Raas Kambooni.
Khariidadaha la faafiyey waxaa ka mid ah tan hoose oo ay faafisay shabakadda Energy-Pedia.com (ee ka soo baxda London, waxna ka qorta arrimaha la xiriira tamarta).
Khariidadaas waxaa si waadax ah uga muuqda in Block L5 uu gudaha ugu jiro dhulbadeedka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Sidoo kale khariidadda hoose oo ay faafisay Petroview waxay muujinaysaa habkaas sare mid la mid ah oo cabirka aagga Block L5 uu gudaha u soo gelayo xuduudka Soomaaliya.
Marka la eego khariidadaha la faafiyey waxay muujinayaan qaabka Block L5 ay Kenya ugu soo xad gudbeyso in uu yahay muuqaal la mid ah sidii ku sawirnaa khariidadihii ay Kenya u gudbisatey Qarammada Midoobey 2009 markii uu heshiiskii Is-afgarad (MoU) dhexmaray DFKMG iyo Kenya.
Marka la xisaabiyo bed ahaan inta uu leekaanayo baaxadda badda ee ay Kenya gudaha u soo geleyso dhulbadeedka (Somalia Territorial Water) waxaa bedkaasi noqonayaa 3900 sq km. (Akhri qaab xisaabintii Saalihi (pdf))
Eeg qormada Saalihi: http://somalitalk.com/2011/badda/saalihi.pdf
Baaxaddaas Bedka lagu soo Xadgudubey oo ah 3900 sq km waxa uu qiyaas ahaan 8 jeer ka weyn yahay bedka dhulka dalka Seychelles oo ah 455 sq km.
Haddaba, maadaama baarlamaanka Soomaaliya uu October 8, 2011 soo saaray xeer iska hor taagaya cid kasta oo ku soo xadgudubta dhulbadeedka Soomaaliya, markaas xukuumadda FKMG waxaan weydiineynaa in ay Kenya iska hortaagi doonto xadgudubka ay kula kacayso qarannimada dhulka Badda Soomaaliyeed? Waxaana shacabka Soomaaliyeed ay Xukuumadda FKMG iyo Baarlamaankaba ka filayaan inay si rasmi ah Kenya uga dalbadaan in ay faraha kala baxdo ku soo xad gudubka dhulbadeedka Soomaaliyeed, islamarkaasna bedesho khariidadaha ay sida khaldan ugu caalaamadsanayso Block L5 oo ay aad ugashay gudaha badda Soomaaliya, taas oo Kenya ay usoo leexisay xarriiqda xuduud badeedka dhanka Raaskamboni ee Kismaayo.
Waxaan Soo aragnay ku xadgudubka Badda Soomaaliya ay Kenya kusoo xadgudubtay, kadib markii uu‘u shaqayn waayey heshiiskii MOU ee xukuumaddii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke lagashay, inay si toos ah dhulbadeed Soomaaliyeed kabaaranayso shidaal. Hadaba su’aasha is waydiinta leh ayaa waxay tahay Dowladdaha Shariif Axmed Madaxwaynaha ka yahay, Kenya ma ka hor istaagi doonaan xadgudubkeeda? Intaanan Jawaabta u galin, aan dib u jaleecno cilmi baaristii SomaliTalk badda kasamaysay 2009, si toos ahna Dowladihii Shariif Axmed ugu gudbisay si ay wax uga qabtaan soo galitaanka Kenya ay soo gashay Badda Soomaaliya, Sanadkii 2009. Qaybta khusaysay Kenya iyo inay kusoo durugtay aaga Raas Kanbooni hoos ka akhri;
Sidoo kale maadaama Soomaaliya aysan ka jirin dawlad dhexe oo shaqayneysa xiligan, siday DFKS ku andacoonayso, weli khad sugan (ama cabbir rasmi ah) looma samayn xadka badda ee ay la wadaagto dalalka deriska la ah: Jabuuti oo Galbeed kaga aadan, Yemen oo Waqooyi iyo Waqooyi Bari ka xigta iyo Kenya oo xigta dhanka Koonfureed. Ugu dambayntii marka ay Soomaaliya bilowdo in ay xadka badda kala xaajooto dalalka deriska la ah haday kusoo durkaan, waxaa jiri doono muran u dhaxaydoona Soomaaliya iyo labada dal oo ah Yemen iyo Kenya.
Jawaabta Su’aashii kor aan kusoo xusnay, waxaa laga sugayaa Baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaliyeed, maadaama Dowladdaha meel ku gaarka ah ee Shariif Axmed ay xogtaas u ogaayeen si toos ah iyo si dadbanba, inta la’ogyahayna ilaa hadda wax talaabo ah aysan ka qaadin soo xadgudubka Kenya. Goormuu soo bilowday Damaaciga Kenya ku doonayso Barriga iyo Badda Soomaaliya inay ku sad bursato? Arinta Barriga ee Gobolada NFD xiligeeda ayaan ka hadli doonaa, taariikh dheerna waa leeyihiin, hase ahaatee iyadoo kooba ka akhri isafgaradkii Caruusha ee lagu malgay NFD. Taariikhadan kooban oo aan shaacinay mar hore aan wada guud maro, si aan u ogaano, xiliga uu soo bilowday Damaaciga Kenya.
1960-1967: Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay, waxay Dastuurkeeda ku qeexday in dhulkeeda xorta ah uu soo hoos gelayo Dhul-badeedka (Territorial Sea). Dawladdii Soomaaliya sannadkii 1967 ayey fogaantii xadka Territorial Sea ee ahaa 12 mayl-badeed ee gumaystayaashii dejiyeen waxay ka dhigtay 200 mayl-badeed (370.4km) Territorial Sea.
Su’alaahalaan iyo kuwo kaloo badan ayaa muwaadinka Soomaaliyeed is waydiinayaan, jawaabta oo kooban waa su’aal kale! Maxay ku salaysanyahay damaca Shisheeye ee ku ‘aadan Badda Soomaaliya? Muddada dheer ee aan daraasada ku samaynaynay badda Soomaaliya 2007 ilaa hadda, arrimaha muuqda ayaa waxaa kamid ah in loo socdo khayraadka ku jira Badda Soomaaliya, gaar ahaan meesha xuduuda badda aan ka wadaagno Kenya.
Norway waxay ku howlanayd sidii Kenya ay uga caawin lahayd sidii ay ula wareegi lahayd dhulbaddeedka aagga Raas Kanbooni, waxaana London lagu soo dajiyey qorshayaasha iyo nidaamka Badda Soomaaliyeed gacanta ka bixinaya, waxaana kuligeed Wasiiradaii Badda ee DFKM si is daba joog ah ugu noq noqdeen dalka ingiriiska oo ay sheegeen inay kala yimaadeen qorshe qeexaya xadayn cusub oo ah in laga tanaasuro 200nm oo Terrotorail water ah, loona badalo nimaad kale oo ka dhigaya 12nm Dhulbaddeedka Soomaaliya, loona guuro qorshihii EEZ-ga ee Baarlamaanku diiday. Arintii difaaca badda hada ayey gun iyo caar bixisay, maxaa yeelay waxaa si qayaxan usoo if baxay damacii Kenya iyo reer Yurub ee waalaa, maadaama Kenya bilowday Dhul Soomaaliyeed inay Shidaal ka baarato, difaaca badda hada ayaa meeshii la isku hayey xaqiiqadiisii lagaaray, xukuumadda Soomaaliyana laga rabaa inay waajibkeeda gudato.
Waxaan kusoo aragnay qoraalada kore in Kenya damac kujiray xiligii todobaatameeyadii (1972), laakiin masuuliyiintii Soomaaliyeed gaashaanka u daruureen, Kenya xiligaas waxay ku qanacsanayd una doodaysay in la tirtiro Dhulbaddeed (territorial waters) lagana dhigo Aaga gaarka ah ee dhaqaalaha (EEZ) arintaas markay arkeen Masuuliyiintii Soomaaliyeed ee xiligaas joogtay waxay soo saareen XEERKA BADDA SOOMAALIEED, NO. 37. Waxaase nasiib daro ah in Madaxwaynaha Kenya xiligan Kibaki uu 2005 kusoo xadgudbay badda Soomaaliya, kuna darsaday cabir uu Qarammada Midoobay u gudbisaday, isagoo sheeganaya in aaga Block L5 kuyaalo in Kenya leedahay loogu daro khariiradahii horay Kenya uga diiwaan gashanaa QM.
Waxaase taas ka naxdin baddan in dhigiisa xilligan Shariif Sh. Axmed xukuumaddiisu u saxiixay/ogolaaday 2009 heshiis Kenya u sahlaya in dammaceedu hirgalo, waxaase laalay MOU Baarlamaanka isla sanadkaasba.
Waxaa xukuumadda FKMG Saxiixay C/raxmaan C/shakuur
Norway ayaa Soomaaliya horay shidaal uga baartay xiligii Siyaad Barre, kadibna shirkado ka horeeyey heshiis lala galay ayaa soo baxay taasina waxay kaliftay in dib loogala noqday rukhsadii shidaal baarida, laakiin tobankii sano oo u danbeeyey Norway waxay ku dadaalaysay sidii Kenya ay uga caawin lahayd sidii shidaal loogu soo saari lahaa. (Akhri warbixintii Bashiir Sh. Maxamed).
Waxaase la yaab badnaa markii ay tiri Norway hadalkan, sida Somalitak.com horay u daabacday; June 11, 2010 ayaa Norway waxa ay sheegtay in ay Soomaaliya u samaynayso CABBIRKA aagga ganacsiga EEZ oo ah 200-mayl badeed, taas oo loo qaatay hirgelin arrintii ay DFKMG u ololaynaysey ee ahayd in badda Soomaaliyeed la yiraahdo malaha cabbir la yaqaan oo hadda ayaa loo samaynayaa.
Eeg Page 1-3 Signed (Read Here) ALSO Page 4-12 (Read Here) AMA qoraalka oo dhan ka akhri Halkan.
Arimahaas oo jira oo dhan, waxaa shacabka Soomaaliyeed layaab ku noqotay markii Dr. Cabdiwali Gaas oo ah Raysalwasaaraha DFKMG xiligan ee baddiisa loo socdo, uu ku daray qorshe loogu yeeray Road-Map in Soomaaliya qaadato EEZ, taas oo meesha ka saari lahayd Territorial waters oo ahaa xeerkii Soomaaliya u yaalay 40-kii sano ee lasoo dhaafay. Su’aashuse waxay tahay Dr. C/weli Gaas jawaab noocee ah ayuu kabixin doonaa xadgudubka Kenya?
Sidoo kale waxaa hadda kusoo biiray Faransiiska sida qoraalka aan kusoo bilownay oo Shirkada ka socota TOTAL ay bilowday iibinta Saamiyada 40% Shidaalka aagaas laga baarayo oo uu kujira Block L5 oo gudaha Soomaaliya ah.
Hadaba waxaa cad in dowladaha reer Yurub ka faa’iidaysanayaan Dowlad la’aanta Soomaaliya, (Meel ku gaar iyana isma aaminsana Dowladaha soo xadgudbayana ma’aaminsa) ama ay ka hor dhacayaan inta aan Dowlad rasmi ah ka dhalan Soomaaliya oo awooda inay hadasho oo wadankeeda iyo Qaranimmadeeda difaacato. Qorshahan shidaal baarista ee hadda soo baxay wuxuu leeyahay khatartiisa, waxaana waajib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu difaaco badda Soomaaliyeed. Taas macnaheedu ma’ahan inaan Kenya khayraadkeeda ka faa’iidaysan Karin ama Dhulbaddeedka shidaal kabaarin Karin, ee macnuhu waa inay dhulkeeda ku e kaato, darisnimadda iyo xornimmada/qaranimmada Soomaaliyana xaqdhowrto/ilaaliso, si Soomaaliyana intaas u ilaaliso.
Waxaa muhiima markaan ka hadlayno arrinta badda inaan markasta dib u milicsano taariikhda arinkan, si ay noogu cadaato wadda ay ku socdaan Masuuliyiinta DFKM iyo in ay nagu siyaado waajib nimmada masuuliyada nasaaran inaanan cidna ku halayn, gaar ahaan Baarlamaanka Kumeelgaarka Soomaaliyeed arintan inuu si khaasa isaga xilsaaro ilaa uu soo afjaro.
Agoosto 1, 2009 ayaa baarlamaanka DFKMG si aqlabiyad ah heshiiskaas uga dhigay WAXBA KAMA JIRAAN. Go'aankaas baarlamaanka Soomaaliya muddo 8 bilood ah ayuusan soo dhaafin xafiisyada xukuumaddii Cumar C/rashiid iyo Sheikh Shariif, muddaddas kaddib ayaa loo gudbiyey QM. Waxaana u gudbiyey QM qaar kamid ah Mudanayaasha Baarlamaanka.
March 12, 2010 ayaa Qarammada Midoobey shaaca ka qaaday in heshiiskaas Is-fahamka aan la cuskan karin. Shacabka Soomaaliyeed oo heshiiskaas ka horyimina waxay arrintu ula muuqatay in ay dhammaatay.
Qoraalkii Qarammada Midoobay wuxuu u qoraa sidan;
The MOU has been rejected by the Parliament of the Transitional Federal Government Somalia, and is to be hence treated as non-actionable. Tarjumaad: “ Waxaa diiday MOU-gii (Heshiiskii Is-Afgaradka) Baarlamaanka Dowlada Fedaraalka Kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, sidaas daraadeedna waa in loo tixgeliyo mid aan lagu hawl geli karin ama la cuskan Karin”
Sida sharciga ah ee DFKM ugu qoran Dastuurka waa in Madaxwaynaha uu saxiixo, kadib markii Baarlamaanku soo gudbiyo, kadibna u gudbiyo cida ay khusayso iyo hay'adaha fulinta, taasi weli dhicin (Oct 14, 2011), sababtana DFKM ayaa la waydiinayaa, la xisaabtan kaasna waxaa is leh Baarlamaanka.
Axdiga DFKMG, Qodobkiisa 36aad oo ku saabsan "SHARCI DEJIN", waxa uu dhigayaa sidan:
1. Marka Golaha Shacabka uu soo saaro sharci waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha si uu u ansixiyo.
2. Madaxweynahu labaatan iyo kow (21) maalmood gudahood, marka sharci loo soo gudbiyey si uu u ansaxiyo sida ku qeexan qaybta (1), waxaa uu u cadeynayaa Gudoomiyaha Golaha Shacabka in uu ogaaladay ama diiday sharcigaas.
3. Haddii Madaxweynaha diido inuu ku ansaxiyo sharci la soo hordhigay afar iyo toban (14) maalmood gudahood, wuxuu qoraal tilmaamaya faritaanada sharcigaas ee ay la tahay in dib loo eego si wax looga beddelo uu u gudbinayaa Gudoomiyaha Golaha Shacabka.
4. Golaha Shacabka wuxuu dib u eegayaa sharciga Madaxweynuhu ku soo celiyey iyadoo tixgelinaya faalada Madaxweynaha waxayna :
a) Ogolaanayaa soo jeedinta madaxweynaha iyagoo wax ka beddelay ama aan wax ka beddelin, kuna celinaya mar kale Madaxweynaha si uu u ogolaado, ama
b) Diidayaan soo jeedinta Madaxweynaha waxayna ansixinayaan sharcigii hore oo aan waxba laga bedelin iyadoo lagu meel marinayo cod bixin aan ka yareyn 65% xidhibaanada Golaha Shacabka taasoo Madaxweynaha ogolaan doono sharciga afar iyo toban (14) maalmood gudahood maalinta sharciga la soo gudbiyey.
5. Faafinta sharci uu sameeyey Golaha Shacabka ma dhaqan geli karo ka hor inta aan Iagu daabicin faafinta rasmiga ah ee dowaladda.
Waxaa xusid iyo amaanid muddan Baarlamaanka Soomaaliyeed oo qaatay go’aan taariikhi ah, markuu waxba kama jiraan kasoo qaaday heshiisyadii lagalay intii dowladii dhexe ee Soomaaliya Burburtay 1991. Baarlamaanka oo niyada ku haya sida dowladu u gacan bidaxaysay go’aankii hore ee Baarlamaanka ayaa qodob sharci ah ka dhigay hirgalinta go’aamadaan, wuxuuna yiri sidan; 5. Xukuumad walba oo loo igmado howsha Dalka waxaa la farayaa in ay go’aankaan gaarsiiyaan dhamaman Dowladaha Deriska ah iyo Hay’adaha caalamiga ah.
Jawaabta su’aasha kore waa arimahan soo socda;
1- Inuu Baarlamaanku waqti go’an u qabto DFKM dhaqan galinta go’aanada Baarlamaanku gaaro, gaar ahaan kan ugu danbeeyey ee Badda.
2- In hadii DFKM waajib keeda gudan waydo Baarlamaanku qaado talaabada xigta ee Dastuurku ‘u ogolyahay.
3- In Baarlamaaku DFKM waydiiyo sababta xadgudubka Kenya Dowladu warsaxaafadeed uga soo saari la’adahay, ama uga aamusantahay iyo in wax wada hadal ama cabasho ah DFKM u gudbisay Dowlada Kenya ee soo xadgudubtay.
4- In Baarlamaanku diyaariyo cidii ku dhacda khiyaamo qaran sidii loola xisaabtami lahaa, xil ha hayeen ama horey ha u qabteen e, waddanka ha joogeen ama dibadda ha uga maqnaadeen.
5- In Baarlamaanku arimmaha khuseeya Qaranimmada/Xoriyadda waddanka ay xiriir iyo wadahadal toosa ah kala yeeshaan cida ay khuseeyaan, gaar ahaan dhigooda, inta aysan abaadin/abaajin/duugoobin/laduudsin.
Ugu danbayntii waxaa Bahda SomaliTalk iyo anagoo ku hadlayna magaca Muwaadiniinta Soomaaliyeed u mahad celinaynaa Baarlamaanka Kumeelgaarka Soomaaliyeed, Go’aamadii Taariikhiga ahaa ee uu ka qaatay arrimaha la xiriira Qaranimmada iyo Xornimmada wadanka Soomaaliyeed, sida; joojintii heshiiskii MOU iyo joojinta xaydaynta cusub ee loo guuri lahaa Aaga gaarka ah ee dhaqaalaha (EEZ) lagana guuri lahaa haday hirgali lahayd Dhulbaddeed (territorial waters).
Sidaa si leeg waxaan ugu Mahad celinaynaa Admeral Farah Qare dowrka geesinimada leh ee uu ka qaatay arrinta badda, gaar ahaan waraaqdii uu shirkii Seychelles u qoray.
Sidoo kale Bahda SomaliTalk waxay u mahad celinaysaa dhamaan dadkii ka qayb qaatay Difaaca Badda Soomaaliyeed dhamaantood. Gaar ahaan Saxaafada iyo Suxufiyiinta ka wax ka difaacay Badda Somalia Territorial Waters in uu yahay 200 mayl badeed.
SomaliTalk waxay dhammaan Muwaadinka Soomaaliyeed leedahay “Faanoole fari kama qodna” - Difaacidda Badda Soomaaliyeed ka seexad ma leh.
Lasoco qoraalada kale ee badda ee soo socda:
Eng. Maxamed Cali iyo Xasan Dhooye
06 Oct 2011 - Kenya: Cove Energy announces completion of Kenya offshore farm-in
21 Sep 2011 - Kenya: Total enters exploration in Kenya by acquiring a 40% stake in five offshore blocks in the Lamu Basin
Total enters exploration in Kenya by acquiring a 40% stake in five offshore blocks in the Lamu Basin
Kenya Offshore (L5, L7, L11a, L11B & L12)
Bedka Seychelles ka eeg:
Riigga Batroolka ka Qodaya aagga Magaalada Lamu, Kenya oo ka badbadey Dagaalka Soomaaliya...
Dastuurka Qabyada ah ee DFKMG http://somalitalk.com/2010/08/26/dastuur/
Axdiga DFKMG (2004) http://somalitalk.com/dastuur/tfg.pdf